विदेशबाट फर्किएर मौरी पालन, वार्षिक १४ लाख आम्दानी | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home आर्थिक विदेशबाट फर्किएर मौरी पालन, वार्षिक १४ लाख आम्दानी
विदेशबाट फर्किएर मौरी पालन, वार्षिक १४ लाख आम्दानी
२०७६, १७ कार्तिक आईतवार ०७:४१
झण्डै डेढ दशक विदेशमा पसिना चुहाएर काम गर्दा पनि पैसा बचाउन नसकेपछि आफ्नै देशमा फर्केर मौरी पाल्न थालेका म्याग्दीका एक किसान राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–१, कुहुँका कृषक गोविन्द खत्रीले वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किएर व्यावसायिक मौरीपालन शुरु गरेपछि राम्रै आम्दानी गरेका हुन् ।
स्वदेशमा केही काम पाइएन भन्दै विदेश पुगेर उनले त्यहाँ पनि सोचेजस्तो कमाइ नभएपछि गाउँ फर्किएर शुरु गरेको मौरीपालन व्यवसायबाट मौरी, मह, पोला र मौरीघार विक्री गरेर वर्षमा रू. १४ लाख आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
इराकमा सात, साउदीमा चार र भारतमा साढे दुई गरी झण्डै १४ वर्षको समय बिताएर फर्किएका खत्री अहिले गाउँमै मौरीपालन व्यवसायमा रमाएका छन् । खत्रीले विदेशबाट फर्किएको चार पाँच महीनाको अन्तरालमै शुरुमा तीन घारबाट मौरीपालन व्यवसाय शुरु गरेका थिए । उनले अहिले ९२ ओटा घारमा मौरीपालन गरेर मह उत्पादन भइरहेको बताए ।
‘मैले करिब १४ वर्ष विदेशमा बिताएँ, न राम्रो कमाइ गरें, न शरीरले कहिल्यै सुख पायो’, आफ्नो विदेश बसाइँको तीतो अनुभव सुनाउँदै खत्रीले भने, ‘विदेश होइन, गर्न सक्ने हो भने हामीले आफ्नै गाउँघरमा मनग्य कमाउन सकिन्छ ।’
मौरीपालन व्यवसायमा जिल्लाकै अगुवा कृषकसमेत बनेका खत्रीले गत वर्षको फागुन चैतमा मात्रै झण्डै तीन क्विन्टल मह उत्पादन भएको दाबी गरे । उनले २५० केजीभन्दा बढी मह विक्री गरेको जानकारी दिए । खत्रीले घरबाटै प्रतिकेजी रू.१ हजार ५०० को दरमा मह विक्री गर्दै आएको बताए ।
मौरीसहितको घारलाई रू.८ हजार मूल्य पर्छ । मौरीपालक कृषक खत्रीले हरेक वर्षको जेठ, कात्तिक र फागुन महिनामा मह काढ्ने गरेका छन् । उनले एक मौसममा मात्रै रू. ४ / ५ लाख मह विक्री गरेर कमाउँछन् । गाउँघरमा कात्तिक महीनाको मह राम्रो मान्ने गरिएको छ ।
विगत पाँच वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा मौरीपालन गर्दै आएका कृषक खत्रीले मौसम अनुकूल र मौरीले राम्रोसँग मह उत्पादन गरेको खण्डमा वर्षमा रू.१४ लाख मह विक्री गरेरै आम्दानी हुने गरेको बताए । उनले जिल्लाको भकिम्ली, राखु, पाँकु, कोत्राबाङ, पैयुँपाटालगायत ठाउँमा मौरीसहितका घार बेच्ने गरेको जानकारी दिए । रासस
Previous articleम्याग्दीका ५० वर्ष माथिका खेलाडीहरुलाई टोड्केमा भब्य सम्मान
Next articleबेनपा-६ का यूवाहरुको भेलाले नयाँ क्लव खोल्न तर्दथ समिति गठन